Good News : Pyin-Oo-Lwin um Chin Ralbawi Pakhat CDM ah aa Tel – Onlinenungak
Good News : Pyin-Oo-Lwin um Chin Ralbawi Pakhat CDM ah aa Tel
Pyin-Oo-Lwin um Chin Ralbawi Pakhat CDM ah aa Tel
Pyin-Oo-Lwin khua i Ralkap lei fimcawnnak Defense Service Academy (DSA) ah rianattuan liomi Captain Shing Ling nih CDM ah aa telnak kongaFacebook ahalanghter. Captain Sing Ling hi Mindat khuamiasi i, “CDM ah kaa tel ruang ah dantat ding ka si zong ah ka cohlan ko lai” tiahaFacebook ahattial. The Chin Journal
Ralkap nih nawlngeihnakalak hnu in tlaihkhihatong mi hna cazin
Ralkap nih nawlngeihnakalak hnu in tlaihkhihatong mi hna cazin. AAPP cazin ning ah February 1 Ralkap nih nawlngeihnakalak ni in atu tiang ah minung 1700 leng tleih, tazacuai le warrant chuah siloah sual phawt an si cang.
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်မှစ အဖမ်းအဆီးစာရင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ၏ စာရင်းများအရ ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက် စစ်အာဏာသိမ်းသည့်နေ့မှစပြီး လူပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်ဟာ ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲ၊ ဝရမ်းထုတ် (သို့) ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ္ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်မှစ အဖမ်းအဆီးစာရင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ၏ စာရင်းများအရ ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက် စစ်အာဏာသိမ်းသည့်နေ့မှစပြီး လူပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်ဟာ ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲ၊ ဝရမ်းထုတ် (သို့) ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်. The Hakha Times